အဆိုပါမက်လုံးပေးအုပ်စုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - ရနှေးငှေ့ - 2019
သငျသညျ AutoCAD start သည့်အခါလျှောက်လွှာပညတ်တော်တို့ကို၏ညှနျကွားမှုအမှားတခါတရံတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Temp ဖိုင်တွဲ၏ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုမှ၎င်းငျး, registry ကိုနှင့် operating system ထဲမှာအမှားများနှင့်အတူအဆုံးသတ် - ၎င်း၏အကြောင်းတရားများအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာ AutoCAD command များ၏ညှနျကွား၌တည်ရှိ၏အခါအမှား fix လုပ်နည်း
, ကိုစတင်ယင်းကို C သွားဖို့: အသုံးပြုသူ AppData ဒေသခံ Temp နှင့်စနစ်ခုံဖိနပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ပါမည်။
ထို့နောက်သင် program ကို run သော AutoCAD file ကို install လုပ်ပြီးသားရှိရာ folder ကိုနေရာချထား။ ယွမ်ပေါ်မှာ click နှိပ်ခြင်းနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုသွားပါ။ အဆိုပါ tab ကို "အသုံးပြုပုံများ" နှင့် "အသုံးပြုပုံများ Mode ကို" တွင် Uncheck လယ်ကွင်းများနှင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "လက်ျာဘက်အဆင့်ကို။ " "အိုကေ" ကိုနှိပ်ပါ။
ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့မပါဘူးဆိုရင်, စာနယ်ဇင်း ဦးဝင်း + R ကို နှင့်လိုင်းပေါ်တွင်ရိုက်ထည့်ပါ regedit လို့.
HKEY_CURRENT_USER => Software များ => Microsoft မှ => Windows ကို => CurrentVersion မှာတည်ရှိပါတယ်အပိုင်း, သွားပြီးအလှည့်အပေါငျးတို့သကွဲပြားမှုကနေဒေတာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဒီပြီးနောက်, ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါနှင့်နောက်တဖန် AutoCAD ကို run ။
သတိပေးခြင်း! ဒီစစ်ဆင်ရေးဖျော်ဖြေခြင်းမပြုမီ, အမှတ် restore စနစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်သေချာစေပါ!
AutoCAD နှင့်အတူအခြားပြဿနာများကို: သေစေသော AutoCAD အတွက်အမှားနှင့်မည်သို့ဖြေရှင်း
အလားတူပြဿနာကိုလည်း default အနေနဲ့အဆိုပါ dwg ဖိုင်တွေဖွင့်လှစ်ရန်အသုံးပြုသည်အခြားအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ရှိရာကိစ္စများတွင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သငျသညျ, run က "ပွင့်လင်းမှုနှင့်အတူ" ကိုနှိပ်ပါနှင့်က default program ကိုအဖြစ် AutoCAD ကို select ချင်သောဖိုင်ကို right-click လုပ်ပါ။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီအမှားကိုလည်းသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်၏ရှေ့တော်၌ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်ပေသည်။ အထူးဆော့ဗ်ဝဲ၏အကူအညီဖြင့် malware ကိုများအတွက်စက်စစျဆေးဖို့သေချာပါစေ။
- ဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ၌သစ်စာစောငျ့စစ်သား Kaspersky Internet Security: ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြု
ကိုလည်းကြည့်ပါ: AutoCAD သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
ကျနော်တို့လျှောက်လွှာ AutoCAD command များ၏ညှနျကွား၌တည်ရှိ၏အခါအမှားဆုံးအတော်ကြာနည်းလမ်းများမှာကြည့်ရှုကြ၏။ ငါတို့သည်ဤအချက်အလက်သည်သင်အားသာချက်မှဆောင်ခဲ့လျှင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: KDA - POPSTARS ft Madison Beer, GI-DLE, Jaira Burns. Official Music Video - League of Legends (စက်တင်ဘာလ 2019).
USB flash drive ကို
SRS အသံ Sandbox 1.10.2.0
Xerox Phaser 3140 ပရင်တာများအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
ကျနော်တို့ပိုကောင်းအောင်နဲ့ Windows ပေါ်တွင်အပျက်အစီးများတဲ့ကွန်ပျူတာသန့်ရှင်းတဲ့လုပ်ဆောင်သွားရန်ဖို့ဘယ်လိုအရှိန်မြှင့်
အဆိုပါ NVIDIA GeForce GT 240 ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းရှာဖွေခြင်းလုပ်ပြီး install
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးနဲ့အတူရုတ်တရက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုပြောင်းလဲ: ဓါတ်ပုံများ၏ပင်ရာပေါင်းများစွာသင်အခုတံဆိပ်ခေါင်းတစ်ခုထက်မပိုကြီးတဦးတည်းသေးငယ်သော SD ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်အပေါ် fit နိုင်ပါတယ်။ ဤသင်တန်း၏, ကောင်းစွာ - သင်ယခုအရောင်အတွက်ဘယ်အချိန်မဆို, သင့်အသက်တာ၌မဆိုအခါသမယသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်ကိုဖမ်းယူနိုင်သည်! အဘယ်သူမျှမ backup လုပ်ထားလည်းမရှိလျှင်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအမှား (ဗိုင်းရပ်စ်) နဲ့ - - အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်သည်တစ်ကြိမ်မှာဓါတ်ပုံတွေကိုတစည်းကိုဆုံးရှုံး (နှင့်အမှတ်တရများကြောင့်အများကြီးပိုစျေးကြီးနိုငျသညျ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဆက်ဖတ်ရန်
Yandex Disk ကိုလျှို့ဝှက်ချက်များ: install လုပ်အသုံးပြုနိုင်သည်နှင့်ရိုက်ထည့်ဖို့ဘယ်လို
သင့်ရဲ့ PC မှာထံမှ Windows7ကို၏ဒုတိယမိတ္တူ Remove
https://termotools.com my.termotools.com © ရနှေးငှေ့ 2019